Spinels - သမိုင်းနည်းနည်း - HIGH JEWELERY အိပ်မက်
Spinels - သမိုင်းအနည်းငယ်
သမိုင်းအပိုင်းအစများနှင့် ပတ္တမြားဟု အထင်မှားခဲ့ဖူးသော spinel ပါ၀င်သည့် လက်ရာအချို့။
Spinelle ကို ပေါက်ဖွားစေသော အခြား Rubies အမျိုးအစားတစ်ခုလည်း ရှိပါသည်။
16 တွင် 1555 ရာစု alchemist Richard Eden
1783 ခုနှစ်အထိ အနီရောင်နှင့် ပန်းရောင် spinels များ ပတ္တမြားတွေနဲ့ ရောထွေးနေခဲ့တယ်။ Spinels သည် ကောင်းသော ပန်းရောင်ကျောက်မျက်များအဖြစ် လူသိများပြီးသည့်တိုင် လူများက ၎င်းတို့အား "ဘာလာ" သို့မဟုတ် "ဘာလ" ပတ္တမြားဟု ခေါ်ဆိုဆဲဖြစ်သည်။ ဤအသုံးအနှုန်းသည် အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှိ မိုင်းတွင်းများတည်ရှိရာ Badakhshan ၏ ရှေးစကားလုံးမှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
ဤ Kuh-i-Lal ('တောင်နီ') မိုင်းများသည် အေဒီ 1 ရာစုမှ ကမ္ဘာ့စပိန်းကြီးများ ၏ အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ Marco Polo (c.1254–1324) သည် ဘုရင်အတွက်သာ “အကောင်းစား အဖိုးတန် ပတ္တမြား” ကို မည်ကဲ့သို့ တူးဖော်ခဲ့သည်ကို ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဘုရင်ကိုယ်တိုင်က ရိက္ခာတစ်ခုလုံးကို ပိုင်ဆိုင်ပြီး တခြားဘုရင်တွေဆီ လက်ဆောင်အဖြစ် ဒါမှမဟုတ် လက်ဆောင်အဖြစ် ပေးလိုက်မယ်။
Mughal ဧကရာဇ်များနှင့် ၎င်းတို့၏ဘိုးဘေးများဖြစ်သည့် Timurids တို့သည် Kuh-i-Lal spinels ကြီးကို ၎င်းတို့၏လှပမှုနှင့် အကာအကွယ်ပေးသည့် talismans အဖြစ် တန်ဖိုးထားသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် ကျောက်မျက်များကို ခုတ်ထစ်ခြင်းထက် ပွတ်တိုက်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့အား အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် အုပ်စိုးရှင်များနှင့် ဘုရင်များ၏ အမည်များကို ရေးထိုးလေ့ရှိသည်။
ထဲမှာ ဗစ်တိုးရီးယားနှင့်အဲလ်ဘတ်ပြတိုက် လန်ဒန်၊ စုဆောင်းမှု Carew Spinel ဧကရာဇ် Jahangir၊ Shah Jahan နှင့် Aurangzeb တို့၏ အမည်များကို ရေးထိုးထားသည်။
The Carew Spinel - Victoria & Albert ပြတိုက်၊ လန်ဒန်။
Mughal ဧကရာဇ် Jahangir၊ Shah Jahan နှင့် 'Alamgir; ဒေါင်လိုက်တူးဖော်; အစွန်းနှစ်ဖက်တွင် စိန်ပါသော ရွှေတံ၊ ပိုးကြိုး။ အမြင့်4စင်တီမီတာ၊ အနံ 2.3 စင်တီမီတာ နှင့် အလေးချိန် 133.5 ကာရက်။
Rt. ဟယ်။ Julia Mary၊ Lady Carew။
ဥရောပတော်ဝင်ဘဏ္ဍာတိုက်သို့ ဝင်ရောက်ဖူးသမျှ အံ့မခန်းဖွယ်ရာ Mughal spinels များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ “ လူမည်းမင်း၏ပတ္တမြား”. အဆိုပါကျောက်မျက်သည် 1367 ခုနှစ်တွင် လူမည်းမင်းသားအား Pedro the Cruel မှပေးခဲ့သော ကြီးမားသောမဖြတ်တောက်ထားသောအနီရောင်စပယ်လ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ လူမည်းမင်းသား၏ Ruby သည် Agincourt တိုက်ပွဲတွင် Henry V ၏ခမောက်ကို တန်ဆာဆင်ထားသည်။ ယခုအခါ ၎င်းသည် ဗြိတိသျှသရဖူရတနာများတွင် အင်ပါယာနိုင်ငံတော်သရဖူကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။
The Imperial State Crown နှင့် Black Prince ၏ Ruby တို့ဖြစ်သည်။ ဗြိတိန်သရဖူရတနာ၊ လန်ဒန်။
Wikipedia Commons မှ ပုံ။
အဆိုပါ Timur ပတ္တမြား
ဗြိတိန်သရဖူတွင်လည်း ၃၆၁ ကာရက်ရှိသည့် “Timur Ruby” သည် Sultan Sahib Qiran နှင့် Ranjit Singh, “Punjab of the Lion” တို့၏ စုဆောင်းမှုတွင် ပါဝင်သည်။ ၁၈၅၁ ခုနှစ်အထိ ပတ္တမြားဟု ယူဆရသည့် Timur Ruby သည် ၎င်း၏ ယခင်ပိုင်ရှင်ငါးဦး၏ အမည်များကို ရေးထိုးထားသည်။ 361 တွင် Timur Ruby ကို လန်ဒန်ရှိ Great Exhibition တွင်ပြသခဲ့ပြီး spinel အဖြစ် ပြန်လည်အမျိုးအစားခွဲခဲ့သည်။ ပြပွဲကြီးပိတ်ပြီးနောက်၊ အရှေ့အိန္ဒိယကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာများ တရားရုံးမှ ဗစ်တိုးရီးယားဘုရင်မကြီးအား လက်ဆောင်အဖြစ် ကျောက်မျက်ရတနာကို ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ လည်ဆွဲထဲမှာ ထည့်ထားတဲ့ သူမရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အပိုင်ဖြစ်လာတယ်။ R. & S. Garrard & Coလန်ဒန်၊ 1853 ။
လည်ဆွဲ၏ဗဟိုရှိ 'Timur Ruby' (စပရင်နယ်) သည် Shah Jahan အပါအဝင် Mughal ဧကရာဇ်များစွာနှင့် သက်ဆိုင်ပြီး Nos 224-5 ကဲ့သို့ 1849 ခုနှစ်တွင် Lahore မှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါလည်ဆွဲအား Koh-i-nûr ကို အစားထိုးရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ဗစ်တိုးရီးယားဘုရင်မအတွက် ဖန်တီးထားတဲ့ အချက်အချာပါ။
Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II 2021။
1762 ခုနှစ်တွင် Catherine the Great နန်းတက်ပွဲအတွက် ပြုလုပ်ခဲ့သော ရုရှားနိုင်ငံ၏ ဧကရာဇ်သရဖူကို အလှဆင်ထားသော အရေးပါသော စနုနယ်လ်တစ်ခုသည် အလှဆင်ထားသည်။
ရုရှားနိုင်ငံ၏ ဧကရာဇ်သရဖူ - ဤသည် ငွေအစား သဘာဝကျောက်မျက်များနှင့် ရွှေဖြူများကို အသုံးပြု၍ အတိအကျ မိတ္တူဖြစ်သည်။
ပိုအရေးကြီးသော spinel ရတနာ
19 ရာစုအတွင်းတွင် ၎င်းတို့၏ နူးညံ့သိမ်မွေ့သောနှင်းဆီအရောင်နှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကို အကောင်းဆုံးအသုံးချရန် စနုနယ်လ်ပြားဖြတ်ခြင်းသည် ဥရောပစံနှုန်းများကို လိုက်နာခဲ့သည်။ 19 ရာစုအတွင်း တပ်ဆင်ခဲ့သော အရေးကြီးသော spinels များ ပါဝင်သည်။ အဆိုပါမျှော်လင့်ချက် spinelအလေးချိန် 50.13 ကာရက်ရှိကာ 2015 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် New Bond Street ၊ Bonhams တွင်ရောင်းချခဲ့ပြီး Munich Treasury ရှိ Queen Therese ၏ "ပတ္တမြား" ရတနာများနှင့် "Bagration" ကျောက်မျက်ရတနာများ၊ ယခု Westminster မြို့စားစုဆောင်းမှုတွင် ပါဝင်ပါသည်။
Bavarian Ruby နှင့် Spinel Parure ပိုင်သရဖူ။ Wikimedia Commons
Bagration Jewellery Parure ပိုင် Tiara။ orderofsplendor.blogspot.com မှပုံ
spinels စုဆောင်းခြင်းအကြောင်း ပိုမိုသိရှိလိုပါသလား။ ထို့နောက် Bonhams ၏ဝဘ်ဆိုဒ်သို့သွားကာဖတ်ပါ။ "101 စုဆောင်းခြင်း - Spinels".
မှတ်ချက်2ခုSpinels - သမိုင်းအနည်းငယ်"
ဟုတ်ကဲ့ Spinel အကြောင်း သိချင်ပါတယ် ၊ အချက်အလက် မျှဝေပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
erastyle.in တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးထွက်လက်ဝတ်ရတနာစုဆောင်းမှုကိုစစ်ဆေးပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံးဒီဇိုင်းများ | ပိုမိုလှပပြီး နောက်ဆုံးထွက်စုဆောင်းမှုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ website erastyle.in သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။